Ciyaartooydii ugu sareysay oo la gudoonsiiyay abaalmarino buugaag kuliyad ah | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Deegaanka Hargabku ISD 834
Meey 25 , 2021
Toddoba arday oo ka tirsan Fasalka 2022 ayaa lagu sharfay Dugsiga Sare ee Stillwater Area oo loogu talagalay guulaha waxbarashadooda iyo kaqeybgalka bulshada. Abaalmarintan ayaa ka timid qaar ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya dalka, oo ay ka mid yihiin Harvard, Dartmouth iyo Yale. Ardayda waxaa la gudoonsiiyay buug gaar ah oo ay doorteen iskuulkooda ama alumadooda.
Jaamacadda Brandeis - Waltham, Massachusetts
Qaataha: Gursimrat Dahry
Abaalmarinta buugaagta ee Jaamacadda Brandeis waxaa loo soo bandhigay ka go'an ka qaybqaadashada bulshada, u adeegidda bulshada, dhaqdhaqaaqa siyaasadeed, caddaaladda bulshada, ama shaqada iskaa wax u qabso.
Kulliyadda Dartmouth - Hanover, New Hampshire
Qaataha: Maya Notch
Abaalmarinta buugaagta Dartmouth College waxaa loo soo bandhigey guulihii tacliimeed ee fiicnaa iyo tabarucaadkii kale ee wanaagsanaa ee dugsiga.
Jaamacadda Harvard - Cambridge, Massachusetts
Qaataha: Ava Karlstad
Abaalmarinta buugaagta ee Harvard College waxaa loo soo bandhigey heer sare ee deeqda waxbarasho iyo guul sare ee meelaha kale ee aan aqoonta ahayn.
Kulliyadda Saint Michael - Colchester, Vermont
Qaatayaasha: Soren Gabor iyo Kylie Galowitz
Abaalmarinta buugaagta ee 'Saint Michael's College' waxaa loo soo bandhigaa hal wiil iyo gabar arday ah iyadoo si joogto ah oo daacadnimo leh ugu heellan bulshada iyo adeegga, damiir bulsho oo aad u sarreeya, iyo hoggaamin.
Kuleejka Wellesley - Wellesley, Massachusetts
Qaataha: Margaret Swenson
Abaalmarinta buugaagta Wellesley ayaa lagu sharfayaa haweeney ka tirsan fasalka hoose oo diiwankeeda tacliimeed iyo dabeecaddeeda ay tahay mid aan caadi aheyn oo iyaduna gacan weyn ka geysatay shaqsiyan dugsigeeda iyo / ama bulshada.
Jaamacadda Yale - New Haven, Connecticut
Qaataha: Jack Hendrickson
Abaalmarinta buugaagta ee Yale University waxaa loo soo bandhigaa arday heer sare ah oo deeq waxbarasho ah, dabeecad shaqsiyadeed oo wanaagsan iyo balanqaad aqooneed.